भ्वाइस अफ नर्स « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नर्सिङ काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा नर्सद्धय सानु तुलाधर र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ नियुक्त
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा नर्सद्धय सानु तुलाधर र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तुलाधर र श्रेष्ठलाई काउन्सिलको सदस्य
नर्सिङ संघको निर्वाचनः प्रा.मनकुमारी राईको प्रगतिशिल प्यानल विजयी
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ संघको १९ औं कार्य समिति चयनका लागि बुधबार (पौष ९ गते) भएको निर्वाचनमा प्रा. मनकुमारी राईको प्रगतिशिल प्यानल बिजयी भएको छ । राईले १
नर्सिङ संघमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान शुरुः कसले मार्ला बाजी ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ संघको १९ औं कार्य समितिको निर्वाचनको लागि बुधबार बिहानदेखि मतदान शुरु भएको छ । निर्वाचनमा संघका साधारण तथा आजीवन सदस्यहरुले मताधिकार गर्न पाउने छन